‘यसरी सम्भव छ वडाको सम्वृद्धि’ - Hamrokhotang
Home » Serofero » ‘यसरी सम्भव छ वडाको सम्वृद्धि’
‘यसरी सम्भव छ वडाको सम्वृद्धि’
खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–३ च्यास्मीटारका वडाध्यक्ष भलराज राई जझारु र शसक्त जनप्रतिनिधि हुन् । वडामा हुने हरेक बिकास निर्माण या सामाजिक काममा सक्रिया उपस्थिति जनाउँदै आएका वडाध्यक्ष राईले हाल समग्र वडाको मुहार परिवर्तन गर्ने बागडोर सम्हालेका छन् । बिकासको सवालमा पछाडि रहेको च्यास्मीटारको सम्बृद्धि कसरी ? प्रस्तुत छ, वडाध्यक्ष राईसँग गरिएको कुराकानीको सारांश ।
– सँधै वडाको एउटै रुप किन, परिवर्तन देखिन्न नी ?
वडा लामो समयसम्म जनप्रतिनिधि विहिन हुन पुग्यो । जनता अधिकार बिहिन भए भने कर्मचारीलाई मात्र अधिकार सम्पन्न बनाइए । यस कारण वडाको परिवर्तन हुन सकेन । वडाको बिकास र परिवर्तनमा चिन्तन गर्ने सकरात्मक व्यक्तीको अभावमा पनि वडा पछि परेको मान्न सकिन्छ ।
–वडाको बिकास÷परिवर्तनका बाधक के–के पाउनु भएको छ ?
माथिबाट हस्तक्षेप हुनु र अहिलेसम्म वडाको परिवर्तनका लागि स्पष्ट निती बन्न नसक्नु परिवर्तनका बाधक हुन् । आफ्नो गाउँलाई ‘कस्तो बनाउने’ भन्ने योजना बनाउने र लागीपर्ने अगुवाको अभाव हुनु पनि अर्को बाधककारुपमा लिएको छु ।
–वडामा जनताले पाउने फरक अनुभूती के–के होलान् ?
जनताले आफ्नै जनप्रतिनिधि पाएको छ । सरोकारवाला सबैसँग हातेमालो गर्दै दिगो बिकासका लागि योजना बनाइने छ । नयाँ योजनाको सुरुवात हुने छ । बिकास निर्माणका नाममा हुने भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्दै भ्रष्टाचारमुक्त वडा र भ्रष्टाचारमुक्त समाज बनाउने छौँ ।
–वडा कार्यालयको अप्ठ्याराहरु के–के हुन् ?
राज्यले नयाँ संरचना अनुशार काम थालेको छ, तर निती÷नियमलाई पूर्णता दिएको छैन । जसका कारण काम गर्न अन्योल छ । असहजता देखिएको छ । वडाध्यक्षको क्षेत्राधिकार समेत साँघुरो छ ।
–के भयो भने हाम्रो वडाको परिवर्तन सहज होला ?
पहिला त वडाको अधिकार स्पष्ट हुनुपर्छ । वडाको परिवर्तनका लागि जनता एकजुट हुनुपर्छ । र, हाम्रो वडा परिवर्तनका लागि सबैमा ढृडसंकल्प हुन जरुरी छ । बिकासलाई राजनैतिक रंग र नजरले हेर्नु हुँदैन ।